ब्याज आम्दानीमा निर्भरता घटाउँदै वाणिज्य बैङ्क | गृहपृष्ठ
Home लगानी ब्याज आम्दानीमा निर्भरता घटाउँदै वाणिज्य बैङ्क
ब्याज आम्दानीमा निर्भरता घटाउँदै वाणिज्य बैङ्क
काठमाडौं । चालू आवको प्रथम त्रैमासमा २८ वाणिज्य बैङ्कहरूको ब्याज आम्दानीमा निर्भरता घटेको देखिएको छ । बैङ्कहरूले शुल्क, कमिशन र बट्टा आम्दानी बढाउन सफल भएपछि यस्तो निर्भरता घटेको हो । चालू आवको असोज मसान्तमा शुल्क, कमिशन तथा बट्टाबाट वाणिज्य बैङ्कहरूले रू. २ अर्ब ४४ करोड आम्दानी गरेका छन् । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बढी हो । बैङ्कहरूको प्रकाशित गरेको प्रथम त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणबाट यस्तो देखिएको हो ।
वाणिज्य बैङ्कहरूले मुख्यतः कर्जा र लगानीबाट आम्दानी गर्ने गर्छन् र सोबाट ब्याज आम्दानी आर्जन गर्छन् । तर, यसबाहेक बैङ्कहरूले विभिन्न सेवा प्रदान गरेर शुल्क, कमिशन तथा बट्टा आम्दानी गर्छन् । यस्तो आम्दानी बढ्नु भनेको बैङ्कहरूले प्रदान गर्ने सेवासुविधा बढेको सङ्केत मान्न सकिन्छ । ब्याज आम्दानीमा कम निर्भरता नै वास्तवमा सफल वाणिज्य बैङ्क हुनुको एक सङ्केत मान्न सकिन्छ । वित्तीय विवरणका आधारमा ५ बैङ्कबाहेक बाँकी २३ वाणिज्य बैङ्कहरूले यस्तो आम्दानी वृद्धि गरेका छन् । यस्तो आम्दानी वृद्धि नहुनेमा बैङ्क अफ काठमाण्डू, सिभिल बैङ्क, हिमालयन बैङ्क, नेपाल एसबीआई बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क रहेका छन् । यो आम्दानी उच्च दरले बढ्ने बैङ्कमा भने नेपाल बैङ्क लिमिटेड रहेको छ । गत असोज मसान्तसम्ममा यस बैङ्कले शुल्क, कमिशन र बट्टाबाट रू. २० करोड ६१ लाख आम्दानी गरेको छ । यो गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा २ सय २२ दशमलव १६ प्रतिशत बढी हो । बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी १८ दशमलव ७० प्रतिशत बढेको छ । बैङ्कले सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता भएको रकम गत आवको तुलनामा ४ गुणा बढाएर रू. २९ करोड सङ्कलन गर्न सफल भएको छ ।
त्यसैगरी, वित्तीय विवरणअनुसार सिभिल बैङ्कको भने शुल्क, कमिशन र बट्टा आम्दानी १६ दशमलव ३३ प्रतिशत घटेर रू. २ करोड ४१ लाखमा सीमित रहेको छ । तर, यस बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी २४ दशमलव ६० प्रतिशत बढेको छ भने खुद नाफा ८ गुणा बढेको छ । यस बैङ्कले सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट रू. ३१ करोड ४५ फिर्ता गर्न सफल भएकाले खुद नाफा बढ्न पुगेको हो । प्राइम कमर्शियल बैङ्कको शुल्क, कमिशन र बट्टा आम्दानी गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा १ सय ३३ प्रतिशत, जनता बैङ्कको १ सय ५ दशमलव ३५ प्रतिशत र एनएमबी बैङ्कको १ सय ३ दशमलव ७९ प्रतिशत बढेको छ । सबैभन्दा कम वृद्धि हुनेमा सिद्धार्थ बैङ्क रहेको छ । यस बैङ्कको सो आम्दानी शून्य दशमलव ६ दशमलव १८ प्रतिशत बढेर रू. ४ करोड ४९ लाख पुगेको छ ।